နေရာစုံကစားနိုင်တဲ့ကစားသမား – Hlataw.com
ကဲ့ဗျာ ဇတ်လမ်းက များတော့ ကြိုပြီး သူတို့ငါးယောက်ကို မိတ်ဆက်ပေးထားရတာပါ ။ ရှိန်းအမေနှင့်ဖြစ်ပျက်တာက ဒီလိုဗျ ကျွန်တော်က သူတို့အိမ်ကိုသွားပြီး ကွန်ပြူတာဂိမ်း မိုးဘိုင်းလီဂျင်တို့ အတူဆော့နေကျလေ အဲ့ဒီနေ့က ကျွန်တော်သွားတော့ သူမရှိဘူး ။ သူ့အဖေက သူ့ကိုတောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ကို ခေါသွားတယ် ။ ကျွန်တော်က မသိတော့ အိမ်တံခါးကိုခေါက်လိုက်တယ် ။ အန်တီမိုးမိုးက တံခါးကို လာဖွင့်ပေးတယ် ။ အန်တီ ရှိန်းရှိလား မေးတော့ သူက မရှိဘူးသားရယ် သူ့အဖေက တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် ခေါ်သွားတယ်လေ ။ သူလည်း အချိန်မရတော့တာကြောင့် သားကိုဖုန်းမဆက်ခဲ့တာနေမှာ လို့ပြောပြီး သားလာလေကွယ် အထဲကိုဝင်ပါအုံးကွ လို့ခေါ်တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့နောက်ကလိုက်သွားတော့ လှမ်းလျောက်တိုင်းခါနေတဲ့ဖင်ကြီးကို ကြည့်မိသွားတယ် ။ သူက အထဲကိုရောက်တော့မှ သားဘာသောက်မလဲ အဖျော်ရည်သောက်မလား အန်တီကမေးတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီ လို့ပြန်ဖြေတယ် ။
သူကကျွန်တော့ကို ပြုံးပြီးတော့” သားထိုင်လေကွာ တစိမ်းဆန်နေတယ် ” လို့ ပြောကာ အိမ်နောက်ကို ဝင်သွားတယ် ။ သူဝင်သွားပြီး ခဏ္ဏလေးအကြာမှာ အဖျော်ရည်သံဘူးကို ပေးလာတယ် ။ အန်တီကိုအခုမှ ပိုပြီး သူ့ရဲ့တစ်ကိုယ်လုံးကို ကြည့်မိသွားတယ် ။ ထမိန်အဝါ ပါးလေးကိုဝတ်ထားပြီး အင်္ကျီကလည်း သူ့ရဲ့ဘရာကိုမြင်အောင်ထိကို ဇာအင်္ကျီပါးပါးလေးဖြစ်နေတယ်သူရဲ့နို့နှစ်လုံးကလည်း ဝင်းဝါပြီး အင်္ကျီလည်ဟိုက်ထဲကနေ ဖောက်ထွက်လာမလား ထင်ရလောက်အောင်ကို မြင်နေရတော့ ကျွန်တော်လည်း ကြည့်မိသွားတယ် ။ သူက ပြုံးလိုက်ပြီး ” ဟင်း..ဟင်း.သားမြင်ရတာကို သဘောကျရဲ့လား ” လို့ မေးလာတော့ ” တောင်းပန်ပါတယ် အန်တီ ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး မရည်ရွယ်ပါဘူး ” လို့ ပြောလိုက်တော့ သူက ” သား သဘောမကျဘူးပေါ့ ” ပြောတော့ ရှက်စိတ်နှင့်ရောဂါ ” အရမ်းကို ကြိုက်ပါတယ် အန်တီ ” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တော့ အန်တီက ကျွန်တော့အနီမှာ ကပ်ပြီးတော့ လာထိုင်တယ် ။
ကျွန်တော်သတိမထားမိတာက အတွင်းခံဘောင်းဘီနှင့် အတွင်းခံဘောင်ဘီကြားကနေ ကျွန်တော့ရဲ့လီးက ဖောက်ထွက်မတတ်ထို့ထွက် တော့ သူကပြုံးကာ ” သားက ရှက်တတ်ပေမဲ့ သားလီးက မရှက်ပါလားကွယ် ” လို့ ပြောကာ ဘောင်းဘီထဲကလီးကို အပေါ်ကနေပွတ်သပ် ပေးကာနားမှာ ကပ်ပြီးပြောလာတယ် ။ သူ့ရဲ့ဆီကနေ ရေမွေးအကောင်းစားရနံ့ကလည်း တခန်းလုံးကိုမွေးကြိုင်နေတယ် ။အသက် ဆယ့်ကိုး နှစ် ဆိုတော့လည်း တက်သွေးကြွပြီး မိန့်မမလုပ်ဘူးတဲ့ ကျွန်တော့အတွက် မိန့်မတစ်ယောက်နှင့်အနီးကပ်နေရတော့ သိတဲ့အတိုင်းဘဲလေဗျာ ။ အဲ့ဒီကြားထဲအန်တီကမိုးက လီးကိုဘောင်ဘီပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်ပေးနေတော့ ပိုပြီးအသက်ရှူသံတွေပြင်းလာတယ် ။သူက နားကိုကပ်ပြီး နားကိုလျာဖျားလေးထိုးသွင်းလိုက်တော့ ယားတာထက်ပိုပြီးဖီးတက်သွားတယ် ။ အန်တီမိုးက ပြုံးပြီး ” သားက လူပျိုအစစ်လား ” မေးတော့ နုတ်ကနေ ” ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်တီ ” လို့ အော်တိုဖြေမိသွားတယ် ။
သူကထပ်ပြီး “သာားရဲ့အမေ အရွယ်အန်တီကို သားစိတ်လှုပ်ရှားတယ် ဆိုတော့ အန်တီအရမ်းပျော်တယ် သိလား ” လို့ပြောကာ ကျွန်တော့လီးကို ပွတ်သပ်ပေးတာကို ရပ်ပြီး သူ့ရဲ့အခန်းကို ခေါ်သွားတယ် ။ သူအခန်းထဲကိုရောက်သွားတော့ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကြီးက ဆီးကာ ကြိုနေတယ် ။ သူက ကျွန်တော့ရဲ့ကို နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းပြီး သူ့ရဲ့အခန်းက တီဗွိ စက်ကိုဖွင့်လိုက်တယ် ။ ဇတ်ကားထဲမှာတော့ အသက်ကြီးကြီးမိန့်မတစ်ယောက်နှင့် ကောင်လေးတစ်ယောက် လုပ်မေတဲ့အခန်းပေါ်လာတယ် ။သူက ကျွန်တော့ရဲ့အနီးကို ပြန်ပြီတော့ လျှောက်လာကာ နုတ်ခမ်းချင်းပြီး ကုတင်ပေါ်ကို တွန်းချလိုက်တယ် ။ သူ့ရဲ့ထမိန်အဝါပါးပါးနှင့် ဇာအင်္ကျီကို တလွှာချင်းချွတ်ပြီးကုတင်ပေါ် တက်လာခဲ့တယ် ။ သူ့ရဲ့အတွင့်ခံကြားထဲကနေ အမွေးတွေဘေးကိုထွက်နေတယ် ။ သူက အတွင်းခံဘောင်းဘီအနက်ရောင်မှာဇာပါတဲ့ ဘရာနှင့်ဆင်တူ ဘရာကိုလည်း ချွတ်ချလိုက်တယ် ။
မိန့်မတစ်ယောက်ရဲ့ အဝတ်စားမဲ့တဲ့ကိုယ်ခန္ဒာကို အတိုင်းသားမြင်လိုက်ရတော့ ကျွန်တော်လည်း အသေချာကို စိုက်ကြည့်မိတယ် ။ သူက ပြုံးကာ ” သား ကြည့်လို့ကောင်းရဲ့လား ” လို့မေးလာတယ် ။ ကျွန်တော်က ” ဟုတ်အန်တီ အခုမှတွေ့ဖူးတာပါ ” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ် ။ သူက ကျွန်တော့ရဲ့ဘေးကနေထိုင်ပြီး ကျွန်တော့ရဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ကူပြီးတော့ ချွတ်ပေးတယ် ။ မိုးပေါ်ကိုချိန်ထားတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ လီးက မီးဖုတ်ထားတဲ့သံချောင်းလိုဘဲ ဖြစ်နေတယ် ။ အန်တီမိုးက လက်နှင့်ကိုင်ကာ ဂွင်းထုပေးပြီး ” သားရဲ့လီးက အရမ်းကြီးတာဘဲ ” ပြောပြီး သူ့ရဲ့နုတ်ခမ်းနီဆိုးထားတဲ့နုတ်ခမ်းနှစ်လွာနှင့် ငုံကာစုပ်ပေးတယ် ။ နူညံတဲ့လျာဖျားလေးနှင့်ဒစ်လေးကို ကစားပေးပြီး အာငွေ့လေး ပေးလာတော့ တောင့်မခံနိုင်ဘဲ ပြီးချင်လာတော့ ” အန်တီ ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ် ” ပြောကာ ထထိုင်ဖို့လုပ်တော့ လက်နှင့်တွန်းချလိုက်ပြီး ဆက်စုတ်ပေးတယ် ။ သူ့ရဲ့ပါးစမ်ထဲမှာ သုတ်ရည်တွေကို ကုန်စင်အောင်ပန်းလိုက်မိတယ် ။
သူက ထွက်သမျှသုတ်ရည်ကို တစ်စက်မကျန် အကုန်ကိုမြိုချလိုက်ပြီးမှ ” သားရဲ့ လူပျိုစစ်စစ်ရဲ့ အချစ်ရည်တွေက အရမ်းကောင်းတာဘဲကွယိ ” လို့ ပြောလာတယ် ။ ကျွန်တော့လီးက ပြီးသွားပေမဲ့ အရှိန်မလျောသေးဘဲ သံချောင်းကြီးလို ထောင်နေတုန်းဘဲ အန်တီမိုးက ကျွန်တော့ကို ဆွဲယူပြီး သူ့ရဲ့နိုတွေ ဆီမှာကပ်ပေးတယ် ။ ကလေးတစ်ယောက်အမေပေမဲ့လည်း သူ့ရဲ့နို့သီးခေါင်းတွေက အနည်းငယ်သာမဲတယ် ။ ဝင်းဝါသောအသားရောင် ပိုင်ဆိုင်သူမို့ သူ့နို့ကိုစို့ရင်းနှင့်ကို နို့သီခေါင်းတွေကထောင်ကာ နီရဲလာတယ် ။ သူကပက်လက်လှန်ကာလှဲချလိုက်ပြီး သူ့ရဲ့အဖုတ်ကြီးဆီကို ခေါင်းကိုတွန်းပို့တယ် ။ သူ့ရဲ့စောက်ဖုတ်က အရည်တွေလဲ့နေပြီး အရည်ကြည်တွေအနည်းငယ်စိုနေပြီ ။ မဲနက်ပြီးတွန့်ကာလိမ်ကောက်တဲ့ သူ့ရဲ့အမွေးအုံကြီးကြားထဲကနေ နီရဲ့ကာ လျုပ်ရှားနေတဲ့နေတဲ့ အစေ့လေးကို လျာဖျားနှင့်ယက်ပေးလိုက်တယ် ။
တီဗွိ ဘက်ကြည့်တော့ ကောင်လေးက အန်တီကြီးရဲ့အစေ့ကို သွားနျင့်မနာအောင်ကိုက်ကာ လက်ညိုနှင့်အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးနေတော့ အဲ့ဒီအတိုင်းဘဲ သူ့ကို ကျွန်တော်လည်း လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူ့ရဲ့ခြေနှစ်ချောင်းကိုအားပြုပြီး ကိုလေးကြွကာ သူ့လက်က ကျွန်တော့ရဲ့ဆံပင်တွေကိုပွတ်သပ်ပြီး သူ့ရဲ့အဖုတ်မှာကပ်ပေးကာ ” ကောင်းလိုက်တာ သားရယ် ” ညီးကာ သူ့ဆီကနေ ဖြူဖြူအဖတ်တွေနှင့် အရည်တွေထွက်လာတယ် ။ သူကထထိုင်ပြီး ကျွန်တော့ရဲ့နုတ်ခမ်းမှာကပ်နေတဲ့ အရည်တွေကို အိပ်ရာဘေးက သူ့အင်္ကျီနှင့်သုတ်ပေးကာ နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းလာတယ် ။ အပေါ်ကနုတ်ခမ်းချင်းနမ်းပေမဲ့ သူ့ရဲ့နူညံ့တဲ့လက်က ကျွန်တော့ရဲ့လီးကို ဂွင်းထုပေးတယ် ။ သူက ပြန်ပြီးလှဲချကာ ကျွန်တော့ကို ဆွဲပြီး သူ့ရဲ့အပေါ်ကိုနုတ်ခမ်းချင်းနမ်းလို့ အဆင်ပြေအောင်ထိဆွဲကာ ယူတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း လက်ထောက်ကာ သူ့ရဲ့နုတ်ခမ်းကိုနမ်းတယ်။
သူ့ရဲ့လက်က ကျွန်တော့ရဲ့လီးကိုကိုင်ကာ သူ့ရဲ့အဖုတ်မှာ နှစ် ချက်လောက်ပွတ်ဆွဲပြီး တေ့ပေးကာ သူ့ရဲ့ခြေနှစ်ချောင်းနှင့် ကျွန်တော့ရဲ့ဖင် ကို ဆွဲယူတော့ သူရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဘဲဝင်သွားတယ် ။ ယောက်ျားတစ်ဆီမှာ ၁၁ နှစ် အလိုးမခံရတဲ့စောက်ဖုတ်က ကျွန်တော့လီးကို ကျပ်ကျပ်လေးနှင့်စီးနေတယ် ။ သူ့ရဲ့အထဲကို အဆုံးထိရောက်သွားတော့ တစ်ချက်ချင်းမြန်မြန်ဘဲ ဆောင်လုပ်ပေးတယ် ။ သူက ကျွန်တော့ကိုအနမ်းရပ်ပြီးမှ ” သားရဲ့ပါကင်ကို သားသူငယ်ချင်းရဲ့အမေဆီမှာ အဖောက်ခံရတာ ကြိုက်ရဲ့လား သား ” လို့ မေးလာ တယ် ။ ကျွန်တော်ကလည်း ” အရမ်းကို ကြိုက်ပါတယ် အန်တီ ” လို့ ပြောကာ သူ့ကိုဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ ” အား.. သားရယ်.. အား… ကောင်းလိုက်တာကွယ်.. အား..မြန်မြန်.. အန်တီ ပြီးတော့မယ်.. အား.. မနှေးစေနဲ့. အား..မြန်မြန်..ဆောင့်. အား.” လို့ သူက ညီးနေတုန်းမှာဘဲ သူမပြီးခင်မှာ ကျွန်တော်ပြီးသွားတယ် ။
ကျွန်တော်ပြီးသွားပေမဲ့လည်း လီးကကျင်ပေမဲ့လည်း ထပ်ကာ အချက် နှစ်ဆယ် ခန့် ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်မှ သူလည်း ပြီးသွားတယ် ။ သူနှင့်အမောဖြေကာ ဖက်ပြီး နှစ်ယောက်သား ကုတင်ပေါ်မှာ မှိန်းနေကြတော့တယ် ။ ” သားက အခုဆိရင် လူပျိုရည်ပျက်သွားပြီဟား. ” လို့ ရယ်ကာ ပါးကိုနမ်းလာတယ် ။ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့ပါးကိုနမ်းလိုက်ပြီး ” ဒိလောက်တဲ့အရသာ ကျွန်တော်မတွ့ဘူးသေးဘူး အန်တီ ” လို့ ပြောလိုက်တော့ သူက ” အဲဒါထက်ကောင်းတာတွေပါ အန်တီကလုပ်ပေးမယ်နော်သား ” ပြောပြီး ပျောကာ အနားယူနေတဲ့လီးကို ကိုင်ကာ သူ့ရဲ့ဘေးကနေ သူရဲ့ညအိပ်အင်္ကျီရှည်ကို ယူကာသုတ်လိုက်တယ် ။ ပြီးမှဘဲ တံတွေးလေးထွေးကာ ဖြူဖွေးကာနူညံတဲ့သူ့ရဲ့ လက်နှင့်ဂွင်းတိုက်ပေးတယ် ။ ညီလေးကဘယ်နေနိုင်မလဲ ဒေါသတကြီးနှင့်ခေါင်းထောင်လာတယ် ။ အမေရိကန်ကဒုံကျည်တွေ ဒုံပျံတွေ ထက်ကိုပိုပြီး ထောင်တက်လာတယ် ။
သူက ကျွန်တော့ရဲ့နုတ်ခမ်းကိုနမ်းကာ လီအပေါ်ကနေခွကာ အရည်တွေသုတ်ပြီးအရည်တွေထပ်ပြီ စိုလာတဲ့အဖုတ်ကြီးမှာ ပွတ်တိုက်ပြီးတော့ အဆုံထိရောက်အောင် ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ချလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့လီးက သူ့ရဲ့အဖုတ်ထဲကိုဝင်သွားတာကိုကြည့်နေတုန်းမှာ ကျွန်တော့လက်ကိုဆွဲပြီး အုန်းသီးအငယ်စားလောက်ရှိတဲ့နို့တွေကို တင်ပေးတယ် ။ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့နို့တွေကိုဆွဲကာ အောက်ကနေပင့်ကာလိုးပေးလိုက်တယ် ။ သူက အပေါ်ကန တစ်ချက်ထထိုင် လုပ်ပေးလိုက် စကော့ဝိုင်းလှည့်ပေးလိုက် လုပ်ပေးတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့နို့တွေကိုဆုပ်ကာပေးတယ် ။ ” အား.ကောင်းလိုက်တာဗျာ ” လို့ ပြောလိုက်တော့. သူက ” အား.. အန်တီလည်း အရမ်းကောင်းတယ်သား ” လို့ပြောကာ စကော့ဝိုင်းကို မြန်မြန်လှည့်ပေးတယ် ။ သူက အဲ့လိုမြန်မြန်လှည့်လေ အရသာပိုတွေ့လာပြီး ပြီးချင်လာတယ် ။ ” အား..အန်တီ ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ် ” လို့ ပြောလိုက်တော့။
သူကရပ်ပြီး ” သား အန်တီကို အနောက်ကနေ မြန်မြန်ဆောင့်ပေး.. အန်တီလည်း ပြီးတော့မယ် ” ပြောကာ လက်ကို ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ လက်ပိုက်သလို လက်ကွေးကာ ထောက်ပေးတယ် ။ ဖင်ကြီးကော့ကာပေးတာ့ သူ့ရဲ့အဖုတ်ကြီးက အပြင်ကိုထွက်လာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း လီးကိုသူ့ရဲ့ အဖုတ်မှာတေ့ပြီး သူ့ခါးကိုကိုင်ကာ ဆောင့်ထည့်လိုက်တယ် ။ ” အား..သားရယ်..” တစ်ချက်ညီးကာ နောက်ပြန်ဆောင့်ပေးလာတယ် ။ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့ခါးကိုကိုင်ကာ မြန်မြန်ဆောင့်ကာ လုပ်ပေးတယ် ။ သူက ” အား..သား..မရပ်နဲ့ အဲ့အတိုင်ဘဲ မြန်မြန်ဆောင့်ပေး.” လို့ပြောလာတော့ ပိုပြီးအရှိန်တင်ကာဆောင့်လုပ်ပြီး သူ့ရဲ့အဖုတ်ထဲမှာ ဆည်ကျိုလို့ ရေတွေထွက်သွားသလိုဘဲ သုတ်ရည်တွေပန်းကာ ပြီးသွားတယ် ။ အဲ့နေ့က တနေ့လုံး နားလိုက်လိုးလိုက်နှင့်ငါး ချီတိတိလုပ်လိုက်တယ် ။ ညနေ အိမ်ပြန်ခါနီမှာ ကျွန်တော့ပါးကိုနမ်းပြီး ” အားရင် အန်တီဆီ လာခဲ့နော် ” လို့ ပြောတယ် ။
ကျွန်တော်လည်း ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်တီလို့ ပြောကာ အိမ်ပြန်ခဲ့တယ် ။ အိမ်ပြန်တော့ အခန်းကိုဝင်ကာ ခဏ္ဏအိပ် ညနေစားပြီး အိပ်ရာဝင်ကာအိပ်လိုက်တော့တယ် ။ ကျွန်တော့ရဲ့အိမ်မှာက သားအဖနှစ်ယောက်ဘဲနေကြတာ အိမ်ကြီးထဲမှာ အမြဲတမ်းကို တိတ်ဆိတ်နေတယ် ။ ထမင်းချက်ကြီးကြီမေက ချက်ပြုတ်လျော်ဖွတ်ပြီးရင် ပြန်သွားတယ် ။ ကျွန်တော့အမေက ကျွန်တော်ဆယ်တန်းနှစ် မှာနှလုံးရောဂါကြောင့် ဆုံးသွားတယ် ။ အဖေကလည်း အလုပ်ကိုသွား ပြန်လာရင်အရက်သောက် ဆိုတော့ သားအဖနှစ်ယောက်နေတဲ့အိမ် ဘယ်ကိုသာယာပါ့မလဲ ။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ သူငယ်ချင်းအမေတွေက ကျွန်တော့ကိုဂရုစိုက်ပေးကြလို့သာ ကျွန်တော်ကစိတ်ဓတ်မကျဘဲ ဆယ်တန်းကို အမှတ်ကောင်းကောင်းနှင့်အောင်မြင်ခဲ့တယ် ။ ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းငါးယောက် ပြန်ဆုံပြီးတော့ သွယ်သွယ်အိမ်မှာ သွယ်သွယ်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာ ကကြခုန်ကြနှင့် အချိန်တွေကုန်တယ် ။
သူ့ရဲ့အိမ်မှာ သူငယ်ချင်တွေအိပ်နေကျဆိုတော့ ပုံမှန်လိုဖြစ်နေတော့ ရှိန်းနှင့်ကျွန်တော်ကတစ်ခန်း သွယ်သွယ်နှင့်နောက်နှစ်ယောက်က တစ်ခန်းအိပ်ကြတယ် ။ သွယ်သွယ်တို့ကျွေးတဲ့ ဝိုင်တွေသောက်ပြီး ရှိန်းကအိပ်ရာပေါ်မှာ ဟောက်နေပြီ ကျွန်တော်လည်းတရေးနိုးတော့ သေးပေါက်ချင်လို့ အိမ်သာကို ယိုင်တိုင်တိုင်နှင့်သွားလိုက်တယ် ။ အိမ်သာထေဲကိုဝင်ကာ သေးပေါက်ပြီး ပြန်ထွက်တော့ အန်တီထားက ထမိန်ကိုချွတ်ပြီး ရေတစ်ဖလားသွန်ပြီး ကျွန်တော့ကိုကြည့်နေတယ် ။ ကျွန်တော်ကလည်း သေးပေါက်ပြီး ထွက်လာပေမဲ့ လီးတောင်တာ မလျောဘဲ ဂျင်းဘောင်းဘီးထဲကနေဖောင်းထွက်နေတယ် ။ အန်တီထားရဲ့ အဝတ်စားမဲ့ခန္ဒာကိုမြင်တော့ ပိုဆိုးပြီး ဘောင်ဘီထဲကနေ ဖောက်ထွက်မတတ်ဖြစ်လာတယ် ။ သူက ဟာ ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့နို့တွေနှင့် စောက်ဖုတ်ကို လက်နှင့်ဖုံးလိုက်တယ် ။ ကျွန်တော်ကလည်း “”တောင်းပန်ပါတယ် အန်တီ “” ပြောပြီးထွက်ခဲ့တယ် ။
အဲ့ညက တစ်ညလုံးအိပ်လို့မပျော်ဘူး အန်တီထားရဲ့အမွေးမရှိတဲ့စောက်ဖုတ်ကြီး နှင့် ဖြူဖွေးကာအနီရောင်နို့သီးခေါင်းလေးတွေက မျက်လုံးထဲကနေမထွက်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ။ မနက်မိုးလင်းတော့ အန်တီထားပြင်ပေးတဲ့ မနက်စာကို သူငယ်ချင်းငါးယောက်နှင့် အတူစားပေမဲ့လည်း အန်တီထားရဲ့အနောက်နေ သူ့ရဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှကို ကြည့်နေမိတယ် ။ အရင်တုန်းက ဘာစိတ်မှမရှိပေမဲ့လည်း တစ်ခါစားဖူးတော့လည်း သိတဲ့အတိုင်းပါဘဲ အဲ့ဒီစိတ် လူတစ်ကိုယ်လုံးကိုစိုးမိုးနေတယ် ။ အန်တီထားနှင့်မျက်လုံးချင်း ဆုံမိတော့လည်း အန်တီထားကို မကြည့်ရဲ့ဘဲ အကြည့်လျွဲထားမိတယ် ။ သူကလည်း မနေ့ညက ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့သလိုဘဲ ပုံမှန်လိုဘဲ ဆက်ဆံတော့မှ စိတ်သက်သာရာ ရသွားမိတယ် ။ အားလုံးစားသောက်ပြီးအိပ်ကို ပြန်လာခဲ့ကြတယ် ။ အဖေက ကုမဏ္ဏီကလူကြီးဆိုတော့လည်း နယ်ကိုထွက်သွားရင် ဆယ် ရက်လောက်ကြာတတ်တယ် ။
သူငယ်ချင်းတွေ ရောက်လာပြီး ပျော်ကြပေမဲ့ ကျွန်တော်ကဖျားနေတော့ သူတို့ပြန်သွားကြတယ် ။ သူတို့ပြန်သွားပြီး ဆယ့်ငါး မိနစ်အကြာမှာ အန်တီထား ကျွန်တော့ရဲ့အိမ်ကို ရောက်လာတယ် ။ အိမ်တံခါးခေါက်တော့ သွားပြီးဖွင့်ပေးတယ် ။ အန်တီထားက အိမ်ထဲကို ဝင်လာပြီး ” သား နေမကောင်းဘူး သွယ်သွယ်ပြောလို့ လာခဲ့တာ ” လို့ ပြောကာ အိမ်ထဲကိုဝင်လာတယ် ။ ဟုတ်အန်တီထား လို့ပြောကာ ဆက်တီကိုသွားတော့ အန်တီထားက ” နေမကောင်ရင် အိပ်ရာကို သွားကာနပါသားရယ် မင်းက လေကြောင့်ထင်တယ် အန်တီထားနှိပ်ပေးမယ် သားရျေ့ကသွား ” ပြောကာ ကွန်တော့ရဲ့အခန်းဆီကိုဘဲ သွားလိုက်ကြတယ်အခန်းထဲရောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း အိပ်ယာပေါ်တက်ကာ ပက်လက်အိပ်တော့ အန်တီထားက ” သားမျောက်ပေး” လို့ဆပြာတော့ ကျွန်တော်လည်း ခေါင်းအုံပေါ်မာလက်ပိုက်ပြီး ခေါင်းထောင်ကာ မောက်ပေးလိုက်လိုက်တယ် ။
အန်တီထားက ဇတ်ကြော ဆွဲပေးတော့ ခေါင်းမူးတာနည်းနည်းသက်သာသွားတယ် ။ ကျွန်တော် သက်သာလာပြီး အန်တီထား လို့ပြောလိုက်တော့ သူ့ရဲ့လက်က ခြေကနေစပြီး နှိပ်နယ်ပေးတယ် ။ လေချဉ်တွေတက်ကာ သက်သာသွားတယ် ။ ခေါင်းကိုက်တာသက်သာသွားပြီး လီးကတောင်လာတယ်။ အဲ့ဒါကမှဂွကျတာ အန်တီထားက ” ပက်လက်နေပေး ” ပြောတော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ဝတ်မထားတော့ ညီလေးက သူ့ရဲ့နူညံ့တဲ့လက် နှိပ်နယ်မူကြောင့် လီးကသွေးတဒုတ်ဒုတ်ခုန်ကာ တောင်နေပြီ အန်တီထား သားအဆင်ပြေပါပြီ ပြောပေမဲ့သူက အတင်းဘဲ ပက်လက်နေ ခိုင်းတော့ ပက်လက်နေလိုက်တော့ မိုးပေါ်ထောင်ချင်နေတဲ့လီးက လွတ်လပ်ခွင့်ရသွားတော့ ရာရှားကဒုံးကျည်လို အမေရိကန်ကိုလည်း ဂရုမစိုက်ဘဲ သူထောင်ချင်သလို ထောင်နေတော့တယ် ။ အန်တီထားလဲ မိုးပေါ်ထောင်နေတဲ့ညီလေးကို မျက်လုံးမလွဲဘဲစိက်ကြည့်တယ် ။
ကျွန်တော်လည်း ရှက်ရှက်နှင့်ပြန်မှောက်ကာနေဖို့လုပ်တော့ အန်တီထားက မမှောက်စေဘဲ ညီလေးကို ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ ပွတ်သပ် ပေတော့ လီးကပိုပြီး ဟိုရမ်ီးရမ်းနှင့်ဖြစ်လာတယ် ။ ယောက်က်ျားကနိုင်ငံခြားသဘောသား ဆိုတော့ သူလည်းဆာလောင်နေပုံပါဘဲ ။ သူကပွတ်သပ်ရုံမကဘဲ ဘောင်ဘီဇေ့ကိုဆွဲချပြီး ညီလေးကိုထုတ်ကြည့်ကာဂွင်းတိုက်ပေးတယ် ။ သူ့ရဲ့နုတ်က “” သားရယ် “” လို့ ပြောပြီး ကျွန်တော့ကိုကြည့် လက်နောက်တစ်ဘက်နှင့် ပါးကိုဆွဲလိမ်လိုက်တယ် ။ ကျွန်တော်လည်း အန်တီထားကို ဆွဲကာနုတ်ခမ်းချင်းနမ်းတယ် ။ သူကလည်း အားကျမခံလျှာကိုသွင်းကာ ကျွန်တော့လျှာကိုလာထိကာ ကစားပေးတယ် ။ သူ့ကိုနမ်းတာရပ်လိုက်ပြီး သူ့ကိုအိပ်ရာပေါ်လှဲချ “” အန်တီထား ကျွန်တော်လုပ်ချင်ပြီဗျာ “” လို့ ပြောလိုက်တော့ သူကပါးကို ဆွဲပြီး “” မင်းကို ဘယ်သူကမလုပ်နဲ့လို့ တားနေလို့လဲ “” လို့ ပြန်ပြောကာ သူကထပြီး သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်လိုက်တယ် ။
ကျွန်တော်လည်း အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်လိုက်တယ် ။ သူ့ကို ပက်လက်လှဲချလိုက်ပြီး သူ့ရဲ့အပေါ်ကနေ လက်ထောက်ကာ မှောက်ချလိုက်တယ် ။ ဒေါသတွေထွက်ပြီး အနီးရောင်တောက်နေတဲ့လီးကို အန်တီထားရဲ့စောက်ဖုတ်ဆီမှာတေ့ကာ သွင်းလိုက်တယ် ။ သူရဲ့အရည်တွေစိုနေလို့ အပေါ်ကိုချော်ကာ ထွက်သွားတယ် ။ “” လုပ်ချင်တာလည်းဗျာ လုပ်လိုက်တော့လည်း တလွှဲကြီး “” ပြောုာ သူ့လက်နှင့်ကိုင်ကာပေးတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ဆောင့်ကာသွင်းလိုက်တော့ အဆုံးထိကို ဝင်သွားတယ် ။ “” အား..သားရယ်.. အရမ်းဘဲ ဒီမှာအောင့်သွားတယ် “” လို့ သူကပြောတော့ “” ဆော်ရီပါ အန်တီ “” ပြောပြီး မလုပ်ဘဲ သူ့ကို နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းတော့ သူက ကျော့ကိုလက်နှင့်အပေါ်သတ်ပေးတယ် ။ အနမ်းကိုခွာလိုက်ပြီးမှ “” ပထမတော့ ဖြည်းဖြည်းဘဲလုပ်နော် မင်းလီးက အန်တီယောက်ျားထက် ပိုကြီးတယ် “” လို့ ပြောတော့ ရင်တွေ ခုန်သွားတယ် ။ “” ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်တီ “” လို့ပြောပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းဘဲ လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။
ယောက်ျားက ခြောက် လ တစ် နှစ် သင်္ဘောတက်မေတော့လည်း သူကဆာနေမှာပေါ့တွေးမိတယ် ။ ကလေးနှစ်ယောက်မွေးထားပေမဲ့လည်း ဗိုက်ခွဲ မွေးထားသူဖြစ်သလို တစ်လက်ကိုင် ဂျပန်အမျိုးစားအဖုတ်ကြီးမို့ စီးပြီးကျပ်နေတာဘဲ ။ ကျွန်တော်လည်း နှစ် မိနစ်လောက်သာ ဖြည်းဖြည်း လုပ်ပေးပြီးနောက်မှာ သူ့နုတ်ခမ်းကိုနမ်းပြီးတော့ မြန်မြန်ဆောင့်လုပ်ကာ ပြီးသွားတယ် ။ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကို အရည်တွေပန်းလိုက်တော့ ကျွန်တော်ပြီးသွားတာကို သူသိပြီး “” အန်တီလည်း ပြီးခါနီပြီ သားရယ် သားက မြန်မြန်ပြီးသွားတယ် “” ပြောတော့ မခံချင်စိတ်ဖြစ်လာပြီး သူ့ရဲ့အထဲကနေ လီးကိုမထုတ်ဘဲ ဆက်ပြီးတော့ မြန်မြန်ဘဲဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ လီးကကျင်ပေမဲ့လည်း သူ့ကိုဆက်လုပ်တော့ သူပြီးသွားမှဘဲသူ့အပေါ်မှာ မှိန်းကာနေလိုက်တယ် ။ သူကလည်း ကျွန်တော့ကိုတင်ကျပ်စွာ ဖက်ထားတယ် ။ တက်သစ်စလူငယ်ဖြစ်သလို ဂျိုးကလည်းထောင်တဲ့အရွယ်မို့ သူ့ရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲမှာစိမ်ထားတဲ့လီးက ပျော့မသွားဘဲထောင်နေတယ် ။
သူ့ကိုအပေါ်ကနေပြီး စတင်ကာဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ် ။သူကလည်းပြန်ပြီးတော့ အောက်ကနေပင့်ကာခံပေးလာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုနုတ်ခမ်းချင်းနမ်းပြီး အပေါ်ကနေလုပ်တာကိုရပ်ပြီး ထိုင်လိုက်ကာ သူ့ရဲ့ခြေနှစ်ချောင်းကို ခါးမှာတင်ပြီးသူ့နို့ကို ဆုပ်ကိုင်တယ် ။ ညို့မျက်လုံးနှင့်ကြည့်နေတဲ့သူ့ကို ပြန်ကာကြည့်ပြီး နို့ကိုဆုပ်ကိုင်ကာ ကြမ်းကြမ်းနှင့်မြန်မြန်ဆောင့်လုပ်ပေးတယ် ။ သူက အားကျမခံ ပြန်ပြီးတော့ ညီးသံလေးနှင့်ပြောလာတယ် ။ “” အား..ရှီး..အောင်ဇော်ရယ်.. အန်တီကောင်းနေပြီ မြန်မြန်ဆောင့်ပေး အား..”” လို့ ညီးရင်းနှင့် စည်းချက်ညီအောင် သူကလည်းလည်း လုပ်ပေးတယ် ။ သူ့နို့ကိုဆုပ်ကိုင်တာကိုဖယ်လိုက်ကာ သူ့ရဲ့ပေါင်ကိုတင်းတင်းဖက်ပြီးဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ ပြီးချင်စိတ်ကဖြစ်လာတယ် သူရဲ့နို့က ပြေးလွားနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ အာရုံပြောင်းကာ ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူရဲ့လက်သည်းတွေနှင့် ကျွန်တော့ရဲ့လက်ကိုညစ်ကာ ဒုတိယအကြိမ်ပြီးသွားတယ် ။
ကျွန်တော်လည်း ဆက်ပြီး တင်းမခံနိုင်တော့ဘဲ “” အား..အန်တီထား.ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ် အား. “” လို့ သူ့ကိုပြောလိုက်တော့ သူက လှိုက်မောသံလေးနှင့် “” ပြီးလိုက်သား..အန်တီအထဲမှာ ပြီးလိုက် အန်တီသားကြောဖြတ်ပြီးသား “” လို့ သူက ပြန်ပြောတော့ ခန္ဒာကိုယ်ထဲကနေ လှည်ပတ်နေတဲ့သွေးတွေဟာ သူ့အထဲကိုစုပြီးပန်းလိုက်သလား မှတ်ရလောက်အောင် ပန်းလိုက်တယ် ။ သူ့အပေါ်ကိုမှောက်ချလိုက်တော့ သူက ကျွန်တော့ရဲ့ဆံပင်တွေကိုပွတ်သပ်ပေးပြီး နဖူးကိုဖြည်းဖြည်းလေးနှင့်အချိန်တော်ကြာအောင်ဘဲ နမ်းပေးလာတယ် ။ အရာသာကိုတွေရှိသူနှင့် ဇရက်တောင်ပံကျိုးတွေ့တော့ အဲ့နေက နောက်ထပ်နှစ်ချီ လုပ်လိုက်ကြသေးတယ် ။ ကျွန်တော်ဟာ အန်တီထားနှင့်အန်တီမိုးတို့ရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်လာခဲ့တယ် ။ သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုသွားလို့ လူရှင်းရင်အဝတ်အစားတွေချွတ်ပြီး နေရာစုံလုပ်ကြသလို လူမရှင်းရင် ကျွန်တော့အိမ်မှာလုပ်ဖြစ်ကြလေတော့သည်…ပြီးပါပြီ။